Hamela ny Heloko ve Andriamanitra? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Népali Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Turkmène Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Tena mamela ny fahotantsika Andriamanitra raha manaraka an’izay lazainy isika. Milaza ny Baiboly fa “vonona hamela heloka” izy, sady “tena mamela heloka tanteraka.” (Nehemia 9:17; Salamo 86:5; Isaia 55:7) Mamela antsika amin’ny fony manontolo izy. ‘Vonoiny’ na fafany tanteraka ny fahotantsika. (Asan’ny Apostoly 3:19) Avelany mandrakizay koa ilay izy. Hoy mantsy izy: “Tsy hotsarovako intsony ny fahotany.” (Jeremia 31:34) Tsy hanameloka antsika na hanasazy antsika amin’ny fahadisoana vitantsika indray Andriamanitra, raha efa navelany ilay izy.
Tsy hoe mamela heloka anefa Andriamanitra, satria tsy vitany ny manasazy antsika na hoe tsy manana fahefana hanao an’izany izy. Tsy entin’ny fihetseham-po fotsiny koa izy rehefa mamela heloka. Tsy manova ny fitsipiny mihitsy izy. Izany no mahatonga azy tsy hamela heloka indraindray.—Josoa 24:19, 20.
Inona avy no tsy maintsy atao raha te hahazo famelan-keloka?
Mila manaiky ianao hoe tsy nankatò ny fitsipik’Andriamanitra. Marina fa mety ho nampalahelo olona ianao tamin’ilay fahotana nataonao. Mila miaiky anefa aloha ianao hoe nanota tamin’Andriamanitra.—Salamo 51:1, 4; Asan’ny Apostoly 24:16.
Mila mivavaka ianao, dia mibaboka ny fahotanao amin’Andriamanitra.—Salamo 32:5; 1 Jaona 1:9.
Tokony halahelo be ianao noho ilay fahotana vitanao. Hanampy anao hibebaka mantsy ny “alahelo araka ny sitrapon’Andriamanitra.” (2 Korintianina 7:10) Midika izany hoe anenenanao ireo zavatra nitarika anao hanao an’ilay fahotana.—Matio 5:27, 28.
Tsy maintsy “miverina” ianao, izany hoe miova. (Asan’ny Apostoly 3:19) Tsy tokony hamerina an’ilay zavatra ratsy nataonao intsony ianao, na mila manova tanteraka ny toe-tsainao sy ny zavatra fanaonao.—Efesianina 4:23, 24.
Miezaha hanitsy izay tsy nety nataonao. (Matio 5:23, 24; 2 Korintianina 7:11) Miresaha amin’izay olona nijaly noho ny fahadisoanao na ny zavatra tsy vitanao, ka mialà tsiny amin’izy ireo. Ataovy avy eo izay rehetra azonao atao mba hanonerana an’ilay izy.—Lioka 19:7-10.
Mangataha famelan-keloka amin’Andriamanitra miorina amin’ny vidim-panavotana nataon’i Jesosy. (Efesianina 1:7) Tsy maintsy mamela ny fahadisoana nataon’ny olona taminao anefa ianao, raha tianao havelan’Andriamanitra ny helokao.—Matio 6:14, 15.
Raha fahotana lehibe ilay nataonao, dia miresaha amin’ny olona afaka hanampy anao hifandray tsara amin’Andriamanitra indray sy afaka hivavaka ho anao.—Jakoba 5:14-16.
Zavatra diso eritreretin’ny olona
“Efa be loatra ny fahotana vitako, ka tsy hamela ahy mihitsy Andriamanitra.”
Nangala-badin’olona sady namono olona i Davida, nefa namela ny helony Andriamanitra
Hamela ny fahadisoantsika Andriamanitra raha manaraka tsara an’ireo zavatra asainy atao isika. Vitany foana mantsy ny mamela ny helotsika, ary tsy miankina amin’ny habetsahan’ilay fahotana sy ny halehiben’ilay izy izany. Vonona hamela antsika izy, na dia fahotana lehibe aza ilay izy na koa efa imbetsaka isika no nanao an’ilay izy.—Isaia 1:18.
Nangala-badin’olona sy namono olona, ohatra, i Davida mpanjakan’ny Israely, nefa navelan’Andriamanitra ny helony. (2 Samoela 12:7-13) Nieritreritra ny apostoly Paoly hoe izy no mpanota indrindra teto an-tany, nefa namela ny helony koa Andriamanitra. (1 Timoty 1:15, 16) Na ireo Jiosy tompon’andraikitra tamin’ny famonoana an’i Jesosy, ilay Mesia, aza navelan’Andriamanitra raha nibebaka.—Asan’ny Apostoly 3:15, 19.
“Raha mikonfesy amin’ny mompera na pasitera aho, dia ho voavela ny heloko.”
Misy olona nomena alalana hamela ny fahotana natao tamin’Andriamanitra ve? Tsia! Marina fa manampy an’ilay nanota hiarina indray ny miresaka ny fahotany amin’ny olona iray. Andriamanitra irery ihany anefa no afaka mamela ny fahotantsika.—Efesianina 4:32; 1 Jaona 1:7, 9.
Nahoana àry i Jesosy no niteny tamin’ny apostoliny hoe: “Izay fahotana avelanareo dia ho voavela, ary izay tsy avelanareo kosa tsy ho voavela”? (Jaona 20:23) Te hilaza izy fa homeny fahefana manokana izy ireo rehefa hahazo fanahy masina.—Jaona 20:22.
Nahazo an’ilay fahefana manokana ireo apostoly, rehefa nirotsaka tamin’izy ireo ny fanahy masina tamin’ny taona 33. (Asan’ny Apostoly 2:1-4) Nampiasa an’izany fahefana izany ny apostoly Petera rehefa nitsara an’i Ananiasy sy Safira. Nampian’ny fanahy masina izy ka nanjary fantany fa fetsifetsy izy mivady. Hita tamin’ny zavatra nolazainy fa tsy hahazo famelan-keloka izy ireo.—Asan’ny Apostoly 5:1-11.
Nanampy an’ireo apostoly ny fanahy masina ka nahavita nanao zavatra mahagaga izy ireo, ohatra hoe nanasitrana sy niteny tamin’ny fiteny samihafa. Tsy nisy intsony anefa izany rehefa maty ny apostoly rehetra. (1 Korintianina 13:8-10) Tsy misy olona afaka mamela ny fahotana nataontsika tamin’Andriamanitra intsony àry amin’izao.
Hizara Hizara Hamela ny Heloko ve Andriamanitra?
ijwbq no. 99